Qaramada Midobay oo ka hadashay eryida ergaygii Soomaaliya u joogay. – The Voice of Northeastern Kenya
Qaramada Midobay oo ka hadashay eryida ergaygii Soomaaliya u joogay.
Star FM January 3, 2019
Ku xigeenka afhayeenka qaramada Midobay oo lagu magacaabo Farhan Haq ayaa sheegay in jimciiyada Qaruumaha ka dhexaysa ay ka fiirsanayso cayrinta Wakiilkeediii Gaarka ah ee u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Nicholas Haysom.
Waxaa uu sheegay inay baaritaano ku bilaabeen sababaha keenay in Wakiilka dalka Soomaaliya ee uu ka howl galayay laga eyriyo, waxaana uu walaac ka muujiyay waxa uu ku Tilmaamay habmaamuuska loo maray eryidiisa.
Ku xigeenka afhayeenka QM wuxuu Tilmaamay inay arkeen arrinka dhacay, ayna isku dayayaan inay helaan faahfaahin kala duwan iyo Cadeymo ayagoo ku salayn doona wixii tallaabooyin dheeraad ah ee loo baahan yahay sidoo kalena QM ay ka fiirsan doonto arintaan.
Afhayeenka ayaa sheegay in Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ay soo gaartay tilaabada dalka Soomaaliya looga eyriyay Haysom, ayna kusoo beegan tahay xilli uu si adag u cambaareeyay weerarrada hubeysan ee lala beegsaday shaqaalaha Qaramada Midoobay ee ku sugan Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in Xoghayaha Guud uu war ka soo saari doono Saacaddaha soo socda ka dib marka ay dhameeyaan baaritaanada ku aadan sababaha lagu ceyriyay Haysom iyo habmaamuuska loo maray in Soomaaliya ay wakiilkaasi dalkeeda ka eriso.
← Ugu yaraan 280 ka mid ah Boko Xaraam oo lagu la dilay Nigeria
DHAGEYSO:Ciidamo hor leh oo la geeyay magaalada Afmadow. →